PressReader - Isolezwe: 2018-09-14 - Balokhu beza nokusha
Balokhu beza nokusha
Isolezwe - 2018-09-14 - EZEZIMOTO - FANELESIBONGE BENGU IMOTO: HYUNDAI TUCSON NECRETA
U-2018 ubonakala njengonyaka omatasa kwaHyundai njengoba bengazibekile phansi bethuthukisa izimoto zabo. Sekulokhu kuqale unyaka bathuthukise iGrand i10, iHyundai i20, ibhasi iH1 kanti ushintsho seludlulele kumaSUV iCreta neTucson. Kuvela nokuthi kungekudala bazokwethula ingqovungqovu yeSUV iSanta Fe kanjalo nenye encane iKona.
ITucson ingenye yezimoto ezenza kahle kule nkampani njengoba kusukela yethuliwe ngo-2009 idayisa ubuthaphuthaphu. Kudayiswe angu-12 591 eyesizukulwane sesithathu eyethulwa ngo-2016.
Njengoba sebeyithuthukisile nje, bashintshe ingaphambili amalambu nobhampa, ingemuva lapho benze kabushoa khona ubhampa nepayipi lika-exhuast. Baphinde bayigaxa namarimu amasha angu-19 inch kwi-1.6 TGDI Elite.
Ngaphakathi benze kabisha udashboard futhi ngingasho ukuthi ibukeka iyinhle kakhulu. Phakathi nenndawo kune audio system screen lapho ukwazi ukuxhuma khona iselula ye-Apple nge-Apple CarPlay.
ITucson itholakala ngezinjini ezihlukene kathathu. Kukhona ekaphethroli engu-2 litre, engu1.6 litre eturbocharged nayo kaphethroli kanjalo nekadizili angu-2.0 litre eturbocharged.
Kufakwe inhlobo ye-Executive entsha enenjini engu-2.0 litre kaphethroli. Idonsa ngogearbox oyi6-speed automatic kanti inamandla angu-115 kW netorque engu-196 Nm. Ifika ne-Electronic Stability Programme, Vehicle Stability Management, izihlalo zesikhumba futhi esomshayeli sihlelwa ngogesi, auto air conditioner neclimate control.
Kufakwe futhi neR2.0 Executive enamandla angu-131 kW netorque engu-200 Nm. Yona injini yayo ingu-2 litre turbodiesel kanti inogearbox oyi-8-speed automatic.
Okuyiyona esezingeni eliphezulu i-Elite bayigaxe ipanoramic sun roof, isihlalo somshayeli esihlelwa ngogesi, idunyiswa ngebhathini kanjalo nekeyless entry. Ifika futhi neBlind Spot Detection neCross Traffic Alert.
Izinjini zayo kukhona engu-2 litre kaphethroli, 2-litre kadizili kanjalo nenamandla angu-130 kW/265 Nm kaphethroli edonsa ngogearbox oyi-7-speed dual clutch transmission.
Kwezokuphepha ifika nama-airbag ngaphambili nawasemaceleni kanjalo nama-curtain airbags. I-Executive ne-Elite zineVehicle Stability Management eyenza ukuthi ibambelele uma kushibilika kanjalo neHill-start Assist Control eyenza ukuthi ingahlehli uma isuka endaweni enyukelayo. Iqhubeka ekhasini 5
INGAPHAMBILI leHyundai Tucson endala kwesokunxele nelisha kwesokudla